….အချို့သော အသက်ပိုင်းများဟာ …ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကို ပျော်ရွှင်လာစေပါတယ်။ အချို့သော အသက်ပိုင်းများကတော့ …၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေကို ဖန်တီးပေးတတ်ပြီး ၊ အချို့သော အသက်ပိုင်းများ ကတော့ ..ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကို …ရင်ခုန်ညွတ်နူးဖွယ်ရာ …စိတ်ခံစားမှုလေးတွေ နဲ့ လှုပ်ခါစေပြန် ပါတယ်။ အချို့သော အသက်ပိုင်းများကတော့ …ကြီးမားတဲ့အမုန်းတွေ ..ငြိုးတေးမှုတွေနဲ့ အတူ… ရန်သူတွေနဲ့ အားပြိုင် အနိုင်လု ကြရပြီး..၊ အချို့သော အသက်ပိုင်းများကတော့ ..ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲကို အသိတရားနဲ့ …အမြင်မှန်တွေ ဖူးပွင့်စေပါတယ်။
ဒီ့အတူပါပဲ…အချို့သော အသက်ပိုင်းများကတော့ ….ခဏတစ်ဖြုတ် လူ့လောကကို အလည်ရောက် လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေကို …ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး ခွဲခွာစေဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ အသက်ပိုင်းတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေထိုင်ရချိန် အသက်ပိုင်းများ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
သန်းပေါင်းများစွာသော ကမ္ဘာ့ လူဦးရေပေါင်း များစွာဟာ ….အသက်တွေ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးရင့်နေကြပါတယ်။ အားလုံးဟာ …နောက်တစ်နှစ် …နောက်တစ်နှစ် ..နဲ့ …တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် …အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုလည်း ဖြတ်သန်းနေကြဆဲ ပါပဲ။ တစ်ချို့တွေက ခုမှ ..အစပျိုးလာကြသလို ..တစ်ချို့တွေကလည်း ခုပဲ အဆုံးသတ်သွားကြ ပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ စစချင်းမှာပဲ အဆုံးသတ်သွားပြီး ..၊ တစ်ချို့တွေက တော့ …ဆုံးဆုံးချင်းမှာပဲ အစပြန်ပျိုးလာကြပြန်တယ်။ အစပျိုးမြန်တဲ့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မှတ်သားမိနေတဲ့ ဇာတိဿရဥာဏ်ကြောင့် ….ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သူတို့ကို …(လူဝင်စား) လို့ ..သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာလို့ ခေါ်တဲ့ သဘာဝအမှန်တရား ကို ကြောင်းကျိုးသင့် ချဉ်းကပ်ရှာဖွေ စူးစမ်းရတဲ့ ပညာတစ်မျိုးကို ကျွန်တော် ခုံမင်တွယ်ကပ် မိခဲ့ရင်း နဲ့ …..ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ၊ ကျွန်တော့် မိသားစု ကို ကျွန်တော် ၊ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်တော် ၊ နီးစပ်ရာ မှန်သမျှ ကို ကျွန်တော် . ..စူးစမ်းခဲ့ရင်း ..ခဲ့ရင်း….အသက်ပိုင်းခြား အမျိုးမျိုး အလိုက် လူတွေ ဟာ …………..
ရပိုင်ခွင့် နဲ့ ဆုံးရှုံးထိုက်မှု တွေ……
မတူညီစွာ ဘဲ… အမျိုးမျိုးပြောင်းလည်း ကြုံတွေ့နေကြရတာကို ကျွန်တော် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ ၊ ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး ပေါ်မှာ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သက်ရောက်နေတယ် ဆိုတာလည်း ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်လာခဲ့မိပါတယ်။
ဒီယုံကြည်မှု နဲ့ အတူ ….ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်တွေ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် အကုန်ဆုံးခံပြီး ..သက်စစ်ဗေဒင် လို့ ခေါ်တဲ့ …အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် လူသားတိုင်းပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးလာတတ်တဲ့ ..အင်အားစုတွေ ကို သဲသဲမဲမဲ သုတေသနပြုခဲ့မိပါတော့တယ်။
ခု ဒီစာပိုဒ်ရဲ့ အောက်မှာ ကျွန်တော် ….ကျွန်တော် ရေးသားဖော်ပြရေးသား မယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ ယုံကြည် ဖို့ / မယုံကြည် ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်သူတိုင်း လက်တွေ့စူးစမ်းကြည့်ပြီး …မှန်ကန် ညီညွတ်ကြောင်း သိခြင်း ခိုင်မာလာချိန်မှာ ..ကိုယ်တိုင်အကျိုးရှိအောင် သုံးမိစေဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်။
ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် သုံးနိုင်မှာမို့လဲ………..မေးစရာရှိပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခု တင်ပြပါမယ်။ လေ့လာ ကြည့်ပါ။
အဟောင်းစွန့် အသစ်ရှာ အသက်ပိုင်းများ
အဟောင်းတို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း နှင့် အသစ်တို့ကို စူးစမ်းရှာဖွေ လိုမှု ဖြစ်တည်စေသော အသက်ပိုင်းများ …………….
( ၆ နှစ် ၊ ၁၃နှစ် ၊ ၂၀နှစ် ၊ ၂၇နှစ်၊ ၃၄နှစ်၊ ၄၁နှစ်၊ ၄၈နှစ်၊ ၅၅နှစ်၊ ၆၂နှစ်၊ ၆၉နှစ်၊၇၆နှစ် )
ကောင်းပြီ ..၊ အထက်ပါ အသက်ပိုင်းများမှာ ..လူသားတွေဟာ ဘာနေ့သားသမီးမျိုးပဲ ဖြစ်ပါစေ….၊ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပဲ ဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါစေ….အဟောင်းတစ်စုံတစ်ရာတို့ကို စွန့်ခွာရတတ်ခြင်း နဲ့ ..အသစ်တစ်စုံတစ်ရာတို့ကို …စူးစမ်းရှာဖွေရမှု ဖြစ်လာစေတတ် တယ် လို့ ပုံသေ မှတ်ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ပုံသေ ..ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကျွန်တော် သုံးပါမယ်။ အခြေခံအကျဆုံး သဘာဝအမှန်တရား ကို ကျောရိုးပြုထားတာကြောင့်ပါ။ ဒီကျောရိုးပေါ်မှာပဲ မတူညီတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ပေါက်ဖွား လာကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပမာအားဖြင့် ….အသက် (၆နှစ်) အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ယောက် အတွက် ….အဆိုပါ ကံတရားအခြေခံဟာ ….သက်ဆိုင်သော အုပ်ထိမ်း သူများရဲ့ ကံနဲ့လည်း အထူးနှီးနွယ်ဆက်စပ်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းအောင် ထပ်မံ ဆိုပါဦးမယ်။ အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ …သူ့မိဘများရဲ့ …အိုးအိမ်အပြောင်းအရွှေ့ ကြုံချိန်ကြောင့် …. အိုးအိမ်ဟောင်းကို စွန့်ခွာပြီး အိုးသစ် အိမ်သစ်မှာ ရောက်ရှိသွားနိုင်သလိုမျိုး …ကံအင်အားသက်ရောက်လာနိုင်သလို…၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့ မိဘတွေ အပြောင်းအရွှေ့ ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့် … ကလေးငယ်ဟာ ..မိဘရင်ခွင်ကနေ ..အဘိုးအဘွား စသူတို့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အုပ်ထိမ်းသူအသစ် ၊ အာဝါသ အသစ်ကို ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတဲ့ ကလေးဘ၀ အရွယ်မှာ အုပ်ထိမ်းသူတွေရဲ့ ကံနဲ့အထူး နှီးနွယ်ဆက်စပ်ပြီး ….ကလေးငယ်ရဲ့ (အဟောင်းစွန့်အသစ်ရှာကံတရား) ကလည်း လှုပ်ရှား ပုံဖော်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘများရဲ့ ကံဇာတာက အထူး နိမ့်ပါး နေချိန်ဆိုရင်တော့ ..မိဘများ ကွယ်လွန်ပြီး …၊ အာဝါသ အသစ်တစ်ခုဆီ ကူးပြောင်းနေထိုင်ရခြင်း ကို ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
အထက်အညာဒေသ ၀မ်းတွင်းမြို့ မှာ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်မျိုး ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် တစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ဆိုင်ကယ် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးငယ်ကို သူ့ရဲ့ ဦးလေးလင်မယား (ကလေးမရှိသေးသူများ) က အမွေစား အမွေခံ အဖြစ် မွေးစား ခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်က ၆ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တွေးကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ … မိဘနှစ်ပါးကလည်း သေကိန်းကြုံလာတယ်။ သားသမီး မထွန်းကားရှာတဲ့ ဦးလေး လင်မယားကလည်း ရင်သွေးမွေးစားရဖို့ အချိန်ကြုံလာတယ် ( နာမည်နဲ့ ဒသာမှာ တွေ့ရပါတယ်) ၊ ကလေးငယ်ကလည်း (အဟောင်းစွန့်အသစ်ရှာကံ) ဖြစ်တည်နေတဲ့ အသက်ပိုင်း ကြုံလာတယ် (မဟာဘုတ်ဇာတာအရလည်း …ထိုကလေးငယ်မှာ ..မူလအာဝါသ ဆုံးရှုံးရတတ်သော ကံ ပါလာတဲ့ ..ငါးခုကြွင်းဖွား ဖြစ်နေပါတယ်) ။
တနည်းအားဖြင့်တော့ …သိုင်းနင်းကွက်ကျ ဆိုသလို… အကြောင်းတရားတွေနဲ့ အကျိုးတရားတွေ ချိတ်ဆက် မိလာကြတာပါ။ ခု ..စာဖတ်သူများနဲ့ ကျွန်တော် တို့ လေ့လာနေကြတာ ကတော့ ကလေး ဘက်က အခြမ်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတရားကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ ..။ ဒါဆို စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အဟောင်းစွန့်အသစ်ရှာ အသက်ပိုင်းများ ကိုလည်း ဖြတ်သန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အသက်ပိုင်းတုန်းက မိမိတို့ ဘာတွေကို စွန့်ခွာခဲ့ရဖူးသလဲ …ဘယ်လို အဟောင်းတွေကို စွန့်ပြီး .. ဘယ်လိုအကြောင်းအရာသစ်တွေဆီကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကို ပြန်လည်တွေးကြည့် ဆင်ခြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့လျှောက်ပြီး တော့ရော …နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့ ထိုကဲ့သို့သော အဟောင်းစွန့်အသစ်ရှာ အသက်ပိုင်းများမှာ ဘာတွေ ကြုံကြရဦးမလဲ … တွေးတော ဆင်ခြင်စရာပါပဲ။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ….လူသားအားလုံးအဖို့ …အသက် ၁၃နှစ် အရွယ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် …အတွေးအမြင် ၊ အယူအဆတွေ စတင်ပြောင်းလဲလာတတ်တဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ယုံကြည်ထားတာတွေအပေါ် သံသယ စ၀င်လာတတ်ပြီး ၊ အရာရာကို စူးစမ်းရှာဖွေမှု အထူးဖြစ်ပွားလာတတ်တဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၁၃နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အင်မတန် ထိမ်းသိမ်းရခက်ခဲပါတယ်။
တစ်ခါမှ ပြန်မပြောဖူးတဲ့ကလေး ပြန်ပြောလာတတ်တာ ၊ အိမ်ကနေ စွတ်ရွတ် ထွက်သွားတတ်တာ ၊ မလုပ်နဲ့လို့ တားထားတာတွေကို ဇွတ်လုပ်လာတတ်တာ ၊ စတန့်ထွင် …စွန့်စား..အရဲကိုးပြီး ထင်ရာလုပ် လာတာမျိုးတွေဟာ …အသက်၁၃နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်တွေ မှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လူကြီးမိဘတွေက ကြိုသိမထားရင် …. ဒီကောင် ဒီနှစ်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်မသိဘူး ..၊ ဒီကလေးမ ဒီနှစ် ..ဘယ်လိုပြောပြောမရဘူး..စသည်ဖြင့် …တွေးမိလာ တတ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်၁၃ နှစ် ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ချိန်မှာ …သူ့လို မဟုတ်တောင် ..သူနဲ့မတူတောင် …အယူဆဟောင်းတွေကို စွန့်ပြီး ၊ အယူဆသစ်တွေ စတင် ရှင်သန် လာခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာ မမေ့အပ်ပါ။
ထိုနည်းတူပါပဲ အသက် ၂၀ အရွယ် လူငယ်တိုင်းဟာ ထိုကဲ့သို့အင်အား သက်ရောက်နေတဲ့ အရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်ကြတော့ ပိုပြီး…ထိမ်းရခက်လာပါတယ်။ အရွယ်ရောက်စ လည်းပြုပြီ ဖြစ်တာမို့ …ကျားမ မရွေး …စိတ်စေရာကို အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လုပ်ကိုင်မိစေသော အချိန်ပါပဲ။
အသက် ၂၇ ၊ ၃၄ ၊ ၄၁ ၊ ၄၈ နှစ် စတဲ့အသက်ပိုင်းတွေမှာတော့ …. အများဆုံးက အလုပ်အကိုင်ဟောင်းကို စွန့်ပြီး အလုပ်ကိုင်နယ်ပယ် သစ်တွေဆီ စွန့်စားထွက်ခွာ တတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အလားတူပဲ …အချို့သော သူတွေကတော့ ထိုအသက်ပိုင်းများမှာ …ပထမ အိမ်ထောင် ပြိုကွဲခြင်း၊ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာရခြင်း၊ အိမ်ဟောင်း ကိုစွန့်ပြီး အိမ်သစ်ကိုပြောင်းခြင်း ၊ မိမိနေထိုင်ရာ မိခင်နိုင်ငံမှ ..စွန့်ခွာပြီး ..တစ်နယ်တစ်ကျေး ရပ်ဝေးဒေသစိမ်းများ ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားဒေသများ မှာ စွန့်စားလုပ်ကိုင်လာကြရခြင်းမျိုးတွေ ….အများဆုံး ဖြစ်တတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
၅၅နှစ်၊ ၆၂နှစ်၊ ၆၉နှစ်၊၇၆နှစ် …စတဲ့အသက်ပိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ တတိယအရွယ် ရဲ့ …အဟောင်းစွန့် အသစ်ရှာ အသက်ပိုင်းများမှာတော့ လူသားတွေဟာ အများအားဖြင့် …သူတို့တစ်သက်လုံး ယုံကြည် လာကြတဲ့ ယုံကြည်ထားမှုတွေအပေါ် သံသယ စိတ်ဖြစ်တည်လာတတ်ကြသလို …၊ တစ်ချို့တွေကလည်း အသက်ကြီးမှ အကဲထ တယ်လို့ အပြောခံရမယ့် အလုပ်မျိုးတွေကို လုပ်မိလာစေပါတယ်။
အများစုကတော့ ….သူတို့တစ်သက်လုံး လုပ်ကိုင်လာတဲ့ အသက်မွေးမှုတွေကနေ အနားယူ တတ်ကြချိန် ဖြစ်လာပါတယ်။ ပင်စင်ယူတာ၊ အလုပ်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်တာ ၊ မိသားစုကို စွန့်ပြီး …မိမိလုပ်ခြင်တာကိုသာ အသားပေးစွန့်စား လုပ်ဆောင်မိတာ ..စသည်အားဖြင့် …တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတတ်တာကတော့. …အဆိုပါတတိယအရွယ်ရဲ့ အဟောင်းစွန့် အသစ်ရှာ အသက်ပိုင်းများမှာ ….လူကြီးတော်တော်များများဟာ သူငယ်ပြန်ခြင်း ၊ သို့မဟုတ် ..သူငယ်ပြန်သကဲ့သို့ …ငယ်မူငယ်သွေးကြွ လုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်မိတတ်ခြင်း ရှိလာတတ်ကြတာကို လူပေါင်းများစွာ … များစွာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ပါ့မယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အသက်ပိုင်းများဟာ … မိမိတို့ရဲ့ မူလတည်ရှိနေဆဲ အခြေအနေများ ကနေ ဖယ်ခွာပြီး နယ်ပယ်သစ် ကဏ္ဍသစ်တွေဆီကို စွန့်စားထွက်ခွာမိစေဖို့ တွန်းအားပေးတတ်သော အသက်ပိုင်းများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရှိထားရပါမယ်။ အရမ်းကာရောတော့ မယုံကြည်ပါနဲ့။ လေ့လာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်သလို …တစ်ခြားဖြတ်သန်းနေသူတွေကိုလည်း အကဲခတ် ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုပါ။
ခပ်ရှုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ဦးအတွက် ..ထိုကဲ့သို့သော အသက်ပိုင်းများ ကြုံချိန်မှာ …တစ်သက်လုံးပေါင်းလာတဲ့မယားကို စွန့်ပြီး စမောလေး ချိတ်သွားနိုင်သလို ..၊ လောကုတ္တရာ အသိဘက်ကို ဦးညွှတ်နေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ထိုအသက်ပိုင်းမျိုးတွေ ကြုံချိန်မှာ…..လောကီအထုပ်အပိုးကို ဖြုတ်ချပြီး ၊ စွန့်ခွာသွားစေနိုင်ဖို့ တွန်းအားလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ မိမိအပေါ် ၊ မိမိအတွေးအမြင် အယူအဆတွေအပေါ် မူတည်ထားပြီး ဆိုင်ရာ အသက်ပိုင်းများ မှာ အဟောင်းတွေကို စွန့်ခွာလို့ အသစ်တွေကို ရှာဖွေဆည်းပူး ရယူခွင့် ကြုံလာ ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ရေ…..ခင်ဗျားတို့ရော …ဘယ်အဟောင်းကို စွန့်ပြီး ၊ ဘယ်အသစ်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေ ရရှိလာလေမလဲ..။ လက်တွေ့ပဲ လေ့လာ စူးစမ်းကြည့်ကြရအောင်လား။
သက်စစ်ဗေဒင် ကနဦး အစကို ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ၏။ အသက်ပိုင်းခြား အားလုံးတွင် ဆိုင်ရာ အာနိသင်များ ၊ ရပိုင်ခွင့် နှင့် ဆုံးရှုံးထိုက်မှုများ ၊ ဆုလဒ် နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ တည်ရှိနေကြစမြဲ ဖြစ်သည်။ သက်စစ်ဗေဒင် ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော် တို့သည် ယင်း တို့ကို တင်ကြိုသိရှိ ပြင်ဆင်ထားပြီး …အဆိုးကို ဖယ်ရှား၍ …အကျိုးကို သယ်ယူသွား နိုင်ခဲ့ပါမူ…………………………………………………………။
စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကို …. ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် …